Inter Milan oo ka hadashay dalabka ay Juventus ku dooneyso saxiixa Mauro Icardi – Gool FM
Inter Milan oo ka hadashay dalabka ay Juventus ku dooneyso saxiixa Mauro Icardi
Dajiye May 30, 2018
(Inter) 30 Maajo 2018. Madaxa fulinta ee kooxda Inter Milan Michael Bolingbroke ayaa ka hadlay wararka ku aadan in Juventus ay dooneyso saxiixa laacibka xulka qaranka Argantina ee Mauro Icardi suuqa xagaaga.
Inkastoo ay Bianconeri uu soo bandhigtay kooxda Inter Milan aduun dhan 50 million euros iyo Gonzalo Higuaín si ay ugu qanciso si ay ugu fasaxaan kabtanka kooxdooda hadana Inter ayaan diyaar u ahayn in ay iska fasaxdo xidigeedan.
Michael Bolingbroke ayaa u sheegay saxaafada: “Waxaan sameyn doonaa wax walba oo sax ah si aan u ilaashano kabtanka kooxda, wuxuu muhiim u yahay kooxdeena”.
“Xilli ciyaareedkii hore wuu dhamaaday, waxaana durbadiiba ka hadleynaa suuqa xagaaga, waxaan dooneynaa inaan dajino dhaqaalaha kooxda, waxaan heysanaa qorsheyaal si aan u sameyno saxiixyada aad ka dooneyno suuqa xagaaga”.
Khabiirka Sky Sports Guillem Balague oo ka warbixiyay shuruuda uu Cristiano Ronaldo kusii joogayo Real Madrid
Christian Eriksen oo ka jawaab celiyay wararka lala xiriirinayo inuu ku biirayo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona